Hery Rajaonarimampianina : Maro no tsy mankasitraka ny fakana fahefana eny an-dalambe -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Maro no tsy mankasitraka ny fakana fahefana eny an-dalambe
11/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny fandaharana isan-kerinandro “Fotoam-bita” fa ny Fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra ny manao ezaka hampivoarana hatrany ny firenena. Tsy vita mora, hoy izy, ny fanarenana ary tsy misy ihany koa ny tonga lafatra.
Maro ny ezaka efa vitan’ny Fitondram-panjakana tao anatin’izay telo taona mahery izay, raha tsy hitanisa afa-tsy ny fananganana fotodrafitrasa fototra teo amin’ny tontolon’ny fahasalamana, fambolena, fandriam-pahalemana, fianarana, sns. Teo ihany koa ny fandraisan’ny Fanjakana an-tanana amin’ny fanampiana ny Orinasa Jirama…
Ankoatra izay, dia nilaza ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa azo atao tsara ny mijery miaraka ny tombontsoam-pirenena. “Ny tenako manokana dia efa niroso tamin’ny dingana famahana ny olana taorian’ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Nijoro soa aman-tsara iny ny Fitsarana Avo na ny HCJ, eny fa na dia tsy andraikitry ny Filoham-pirenena loatra aza ny fananganana izany. Ao anatin’ny fandaminana ihany koa dia nametra-pialana ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, ary voatendry tao anatin’ny fotoana fohy ny praiminisitry ny marimaritra iraisana”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Tanjona, hoy izy, ny hahatongavana amin’ny fifidianana madio sy mangarahara, ary eken’ny rehetra sy ireo mpiara-miombon’antoka any ivelany.
Notsindriany ihany koa fa tamin’ny fahendrena tanteraka no niatrehany izao raharaham-pirenena izao mba hisorohana ny fifandonana tafahoatra sy mampidina ambany indray ny firenena. Tsy sanatria, hoy izy, hiandry ny firenena latsaka an-katerena vao samy ho tonga saina. “Misy fetrany ny zavatra rehetra satria iombonana ny firenena. Misy Malagasy maro nisafidy ny hangina, tsy maneho hevitra… nefa mangetaheta fitoniana. Maro ihany koa ny tsy mankasitraka intsony ny krizy politika eny an-dalambe. Na inona na inona fifandirana, na mafy tahaka ny inona aza ny hambom-po rehetra dia milefitra rehefa ny tombontsoa ambonin’ny firenena no jerena miaraka”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Tetsy andaniny, nanamafy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsy misy fitoniana vanona eto amin’ny firenena raha mbola mitohy ny fifampihantsiana samihafa.
Nanao antso avo amin’ireo solombavambahoaka ihany koa ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny adidy masina nankinin’ny vahoaka amin’izy ireo.
Tsy vitan’izay fa nanao antso avo amin’ireo mpampianatra sy mpanabe ihany koa ny tenany ny amin’ny tsy tokony hanaovana sorona ny fianaran’ny ankizy.